Njem nlegharị anya nke Solomon Islands 'ihu nke echi' na ngosipụta na 'Mi Save Solo'
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Njem nlegharị anya nke Solomon Islands 'ihu nke echi' na ngosi 'Mi Save Solo'
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Solomon Islands • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Njem nlegharị anya nke Solomon Islands 'ihu nke echi' na ngosi 'Mi Save Solo'
Ndị njem nlegharị anya Onye isi oche, Josefa 'Jo' Tuamoto akwụla ụgwọ maka otu ndị nkuzi nkuzi nke Institute of Tourism & Hospitality and Hospitality na ụmụ akwụkwọ ndị bịara nnọkọ njem nlegharị anya 'Mi Save Solo' nke izu gara aga, na-akọwa mbọ ha dị ka ịwepụta ezigbo ngosi maka ihe ọdịnihu ga-echere maka ụlọ ọrụ ndị njem na Solomon Islands.
Ọtụtụ ndị gọọmentị na ndị ọrụ njem njem amaghị, ndị nnọchi anya obodo na mba ofesi bịara emume ahụ, otu ụmụ akwụkwọ ITH iri na itoolu nke ndị nkuzi Annette Honimae, Mary Tavava na Patrick Manuoru duziri na-arụsi ọrụ ike na-arụ ọrụ n'azụ ebe a na-akwadebe, esi nri na isi nri. nri na ihe ọ beụveraụ na-atọ ụtọ na-enye ma na-eme dịka ndị nnọchi anya ụbọchị niile na ogige nke Solomon Islands National University.
"Gọọmentị ekwuola n'ụzọ doro anya na ọ na-ahụ ndị njem na-aghọ isi iyi nke GDP n'ime afọ ise na asaa na-esote," Mr Tuamoto kwuru.
“Dịka ụlọ ọrụ ndị njem anyị na-aga n’ihu na-eto eto, ọ dị mkpa na anyị ga-aga n’ihu na-azụ ụmụ anyị ndị Sọlọmọn Islanders ka ha dị nkwadobe tozuru etozu tozuru oke iji weghachite onwe ha ma jikwaa ihe echi ga - abụ iji bụrụ ogidi akụ na ụba mba a.
“Ọbụna nke kachasị mkpa, ọ dị mkpa na anyị ga - eme ihe niile anyị nwere ike ime iji hụ na anyị debere ọdọ mmiri a dị ịtụnanya n’agwaetiti anyị ma ghara ịhapụ ha n’aka ndị agbata obi anyị dị nso na - eti mkpu ugbu a maka ndị ntorobịa nwere ọgụgụ isi, ndị gụrụ akwụkwọ nke ọma iji mejupụta njikwa ọrụ dị ka ihe eji eme njem ha na-abawanye.
“Iji mee nke ahụ, anyị ga-enye ha otu ohere ahụ n'ala nna ha.
“Nke ahụ, ugbu a, na-eweta ihe ịma aka mana na oke ọsọ nke atụmanya njem anyị na-aga n’ihu na-eto, yana gọọmentị anyị na-eme ihe niile iji kwado ma zụlite mpaghara ahụ, igosipụta ohere ndị ahụ nwere ike bụrụ eziokwu.
“Ekwuola m ya na mbụ, na oge iyigharị gafere na anyị kwesịrị ime ihe ugbu a ma ọ bụrụ na Solomon Islands mpaghara ndi njem bu inweta ebumnuche ya - ma dika odi nkpa, nye umu okoro a di itunanya ohere ha kwesiri.